BARRI MAQAA OFIITTI QAANA’AN DARBEERA! – YEROOBLOG
Yerooblog	Culture&History, Oromia &Ethiopia, Politics, Social Commentary	 October 17, 2014 December 25, 2015 2 Minutes
Torban darbe namichi ani beeku tokko haati manaasaa waan deesseef anif haati manaa koo dubbisuu manasaa dhaqne. Mucaan keenya, Naabeekis nu wajjin ture. Teenyee osoo taphachaa jirruu, gidduutti namchi, ‘’maqaan mucaa keessanii eenyu ture?’’ jedhee nu gaafate. Nutis, “Naabeek” jedhama jennee gammachuutiin itti himne.
Namichis, ‘’wow, maqaa baay’ee miidhagaa ta’e mucaa miidhagaaf baastani, maqaa faranjii fakkaata, baay’ee namatti tola’’ jedhee dinqisiifannaan dubbate. Garuu, ‘’Naabeek, jecha maaliiti?’’ jedhe nu gaafate. Nutis, jecha Afaan Oromoo akka ta’e itti himne. Innis, jechi kun jecha Afaan Oromoo miti, jecha afaan faranjiiti yookaan immoo jecha macaafa qulqulluu keessa jirudha jedhee nufalme. Afaan Oromoo, jecha akkas miidhagu hin qabu nun jedhe.
Nutis tasgabboofnee jecha Afaan Oromoo akka ta’e itti himuu yaalle. Innis, Oromoon ijoolleesaaf maqaa akka Tolasaa, Badhaasaa,Fayyisaa, Gamteessaa jedhu baasa malee maqaa akkasii siruma hin qabu jedhee falmiisaa itti fufe. Nutis, yeroo ammaa kanatti Oromoon ijoolleesaaf maqaa miidhagaa fi ergaa cimaa qabu akka baasaa jiru itti himne. Namichis deebisee,‘’Tole, garuu jechi kun hiika qabaa?” nuun jedhe. Nutis hiikas ta’ee ergaa mataasaa akka qabu itti himne. Daballees, Naabeek jechuun maal akka ta’e Afaan Amaaraatiin ibsineef.
Inni garuu, lakki maqaan kun hiikuma kan qabu natti fakkaatu jedhe. Nutis, maqaa kana kan baasne afaan keenyaatiin akka ta’e itti himne; hiika mataasaa akka qabus hubachiisuu yaalle. Namchis deebisee, ‘’maqaa namni biraan hiikasaa hin beekne mucaa keessaniif maaliif akka baastan naaf hin galle,’’ nun jedhe.
Hamma naaf galeetti, namichi kun mucaa keenyaaf maqaa baay’ee miidhagaa ta’e Afaan Oromootiin waan moggaafneef kan aaree natti fakkaata. Haalli namicha kanaa baay’ee waan naaarseef, haadha manaa kootiin deemu akka qabnu ittin hime. Isheenis ilaalchi namicha akkuma koo ishee aarsaa waantureef mucaa keenya qabannee gara mana keenyaatti deebine.
Yaa jarana,namoonni tokko tokko yeroo nuti ijoollee keenyaaf afaan keenyaan maqaa baasnu maaliif akka gubatan naaf hin galu. Hamman beekutti, mucaa koof yeroon maqaa baasu, namoonni Afaan Oromoo hin beekne hiikni maqaa mucaa koo hin galuufi jedhee yaada’u kanan qabu natti hin fakkaatu. Maqaan mucaa koo maqaa mucaa kooti; ormi waan isa galchu hin qabu.Mucaa koof maqaan barbaade baasuu mirga kooti. Waa hunda caalaa, mucaa koof afaan abbaakoofihaadha kootiin maqaa waan isaa moggaaseef baay’ee naboonsa.Wanti afaan haadhafi abbaa koo natti caalu hin jiru.
Yeroo amma kanatti, Oromoon maqaa hiika cimaa qabu, maqaa yaadachuuf salphaa ta’e, maqaa gurraa namaatti tolu fi maqaa miidhagaa ta’e ijoolleesaaf baasaa jira. Kun immoo, guddina Afaan Oromootiif gahe guddaa qaba jedheen amana.Yeroon maqaa ofiitti qaana’an darbeera. Ijoollee keenyaaf afaan keenya miidhagaa ta’een maqaa haa baasnu. Maalummasaanis sirriitti barsiisaa haaguddisnu. Kana booda afaan ormaatiin,Gabramasqal,Gabrakiristos,Gabrasilaasee,Tassammaa,Kabaddaa, Baqqalaa,Tsahaay, Haymaanoot,Mitikkuu, Massalaa jechuun maqaa ijoollee keenyaaf baasuu kan dirqamnu natti hin fakkaatu. Maqaan akkasii dhaloota amma wajjin kan deemu miti. Moofa’aa fi doofa’aadha.
Maqaalee yeroo amma kanatti Oromoonni ijoolleesaaniif baasaa jiran keesssaa, muraasa armaan gadiitti ilaalu dandeessu.
Naabeek, Naanboon(ii),Maaliyaa,Fileeraa, Mooneet(ii), Harmeenaa, Feenaan, Feeneet, Asaantii Yoomiif, Roobsan, Rooberaa, Rooban, Roobaa, Nimoonaa,Yeroosan, Olbeek Naaol, Naanaatii, Maalgaariin, Ijakoojaan, Beekaam, Naaroob, Siif,Naafyaad,Naahilii, Harmee’ol, Firaaol, Meelaal,Olsan, Naa’ol, Meeroob, Firaanboon, Firaansibeekan, Kookeet(ii), Naayaad, Keetii, Jenneet, Firaan, Naansii, Atinaaf, Anaansii, Beenneet, Anaaniyaa,Anaatol,Barsan,Firaahil,Firaanboon,Firoomsiis,Hilan,
Firaatiin,Naahor,Haaroom,Yeroon,Toliinaa,Naatolii,Naa’if,Namarsan,Naamal,Meelaa,Haaroom,Looreenaa,Loorsaa,Meeyoom,Yoofeet,Nuursaa,Wiinsaa,Alaanbar,Naanaatii,Anaanikaa,Taanaan,Ansii,Simarsan,Namarsan,Sinaaf, Siifan,Mooyiiboon, Naahilii ,Olyaad, Oftaanenus,Yoobsn, Obsineet, Ifabaas
Published October 17, 2014 December 25, 2015
Previous Post Labsa Tokkoomuu ABO fi KY
Next Post Irreechaa: Color & Treasure of Oromo
4 thoughts on “BARRI MAQAA OFIITTI QAANA’AN DARBEERA!”
yaada gariidha waa heddun irra baradhe mucaa koof maqaan mogasuuf waan naa filachiftanif galtomaa.
Loorsaa, Wiinsaa, Beenneet, Meelaa……… Jechun maal????
Aba Bulgu jechuun maali?
July 30, 2018 at 14:16